Shirweynaha Tiknoolojiyadda oo maanta Muqdisho ka furmaya - Halbeeg News
Shirweynaha Tiknoolojiyadda oo maanta Muqdisho ka furmaya
MUQDISHO (HALBEEG)- Shirweynaha Tiknoolijiyadda Muqdisho ayaa maanta lagu wadaa in uu si rasmi uga furmo Magalada Muqdisho.
Shiirweynaha Tiknoolijiyadda Muqdisho oo ay soo qaban qaabisay shirkadda Irise Hub ayaa waxaa taaba gelinayaa maamul gobolka Banaadir waxaana uu Muqdisho ka socon doonaa sadexda maalmood ee na soo aada.
Shirweynaha ayaa waxaa lagu wadaa in ay ka soo qeyb galaan guud ahaan shirkadaha ka shaqeeya arrimaha Teknoolojiyadda waxaana uu ajendaha sanadkan yahay in la fursado loo abuuro dhalinyarada iyada oo laga faaiideysano hal-abuurka iyo teknoolojiyadda.
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdi Canshuur Xasan iyo Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa in ay ka qeyb galaan xafladda furitaanka shirweynaha.
Waxaa dhowaan Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirweynaha 3aad ee Madasha Xirfadleyda Teknolojiyada (Somali Network Operators Group – SomNOG) iyadoo dabayaaqadii isbuucii horena la soo gabagabeeyay Carwada Isgaarsiinta iyo Tiknoolojiyadda Soomaaliya.
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyadda Soomaaliya Cabdi Cashuur Xassan oo ka hadlayay Shirka Madasha Xirfadleyda ayaa ku u bixiyay isbuucaan todobaadkii Teknoolojiyadda dalka.
Safiirka Soomaaliya ee Sudan oo warqadaha aqoonsiga laga guddoomay
Buundada ugu dheer Adduunka oo dul marta badda oo xariga laga jaray